Ihe mgbochi mmiri: Gịnị mere ntanetịime weebụ nwere ike iji na-atọ ụtọ?
Nchịkọta weebụ bụ usoro ịntanetị maka ndị chọrọ iwepụ ụfọdụ data site na ọtụtụ weebụsaịtị ma chekwaa ha na faịlụ ha. Dị ka Hartley Brody (onye edemede nke Ultimate Guide of Web Scraping), onye na-emepụta weebụ na onye na-ahụ maka nkà na ụzụ, nchịkọta weebụ nwere ike ịbụ ahụmahụ na-atọ ụtọ. Hartley Brody ebudatara ọtụtụ ọdịnaya site na ọtụtụ weebụsaịtị, dịka blọọgụ egwu na Amazon.com. Site na ahụmịhe ya, ọ ghọtara na enwere ike iwepụ ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Ihe ndị a bụ isi ihe mere ntanetị weebụ nwere ike ịbụ ahụmịhe ọchị - jacquard stoff anzug kinder.
Ebe nrụọrụ weebụ dị mma karịa APIs
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ nwere API, ha nwere ọtụtụ njedebe. Ọ bụrụ na API nyere ohere ịnweta ozi niile, ndị na-enyocha weebụ ga-agbaso ọnụ ọgụgụ ha. Ebe nrụọrụ weebụ ga-agbanwe mgbanwe na ebe nrụọrụ weebụ ha, ma otu mgbanwe na usoro data ga-egosipụta na ụbọchị API ma ọ bụ ọnwa ole na ole ka e mesịrị. Ma ndị ahịa n'Ịntanet nwere ike ịba uru maka API. Dịka ọmụmaatụ, oge ọ bụla ha na-abanye n'ime saịtị (dịka Twitter), a haziri ụdị edemede ahụ na API. N'ezie, otu API na-akọwa ụzọ ụfọdụ usoro mmemme si emekọrịta na onye ọzọ.
Ulo oru Ejila Ogugu nke Mgbapụta
Nchọgharị weebụ nwere ike ịnwa ịmepe saịtị ụfọdụ karịa otu ugboro, n'enweghị nsogbu ọ bụla. Taa, ọtụtụ ụlọ ọrụ adịghị enwe usoro nchebe siri ike iji kpuchie saịtị ha maka ịnweta ngwa ngwa..
Otu esi esi na nchịkọta saịtị
Otu n'ime ihe mbụ ndị nyocha weebụ mere bụ ịhazi ihe ọmụma niile ha chọrọ n'ụzọ ụfọdụ. Ọrụ niile a na-eme site na koodu a na-akpọ 'onye nchacha', nke na-eziga ajụjụ na ibe weebụ. Mgbe ahụ, ọ na-ekpochapụ ihe odide HTML na ịchọ maka ihe ọmụma doro anya.
Ebe nrụọrụ weebụ na-enye Kacha mma ka mma
Ịgagharị site na API nke a na-adịghị edozi nwere ike ịbụ usoro siri ike, ọ pụkwara iwepụ ọtụtụ awa. Taa, ebe nrụọrụ weebụ nwere nhazi dị ọcha, a pụkwara iwepụ ha ngwa ngwa.
Ịchọta Ezi Akwukwo Igbo
Hartley Brody na-elekwasị anya na-eme nyocha maka ịchọta ọbá akwụkwọ HTML dị mma n'asụsụ ha họọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike iji Python ma ọ bụ Mma Ofe. Ọ na-ekwu na ndị na-ere ahịa n'Ịntanet na-agbalị iwepụ ụfọdụ data kwesịrị ịchọpụta URL iji rịọ na ihe ndị DOM. Ụlọ akwụkwọ ndị ahụ nwere ike ịchọta ha niile ozi gbasara.
A Pụrụ Iwepu Nwunye Niile
Ọtụtụ ndị ahịa na-ekweta na enweghi ike iwepu ụfọdụ weebụsaịtị. Ma nke a abụghị eziokwu. N'ezie, enwere ike iwepu ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-eji AJAX iji bulie data ahụ, ọ ga-efopụ ya ngwa ngwa.
Ịchịkọta Data Ziri Ezi
Ndị ọrụ nwere ike ịchọta ma wepụ ọtụtụ ihe site na weebụsaịtị dị iche iche. Ha nwere ike idetuo data dịgasị iche iji mezue ọrụ ha site na ịnọdụ na kọmputa ha.
Ihe ndị kachasị mma iji tụlee maka nyocha weebụ
Ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ taa anaghị ekwe ka ntanetị weebụ. N'ihi ya, ndị na-enyocha weebụ kwesịrị ịgụ Usoro na Ọnọdụ nke saịtị ụfọdụ iji hụ ma a ga-ahapụ ha ka ha gaa n'ihu. Ha kwesịkwara ịma na ụfọdụ ibe weebụ na-eji ngwanrọ na-egbochi scrapers web. E nwekwara ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-ekwu n'ụzọ doro anya na ndị ọbịa kwesịrị ịtọ ụfọdụ kuki iji nweta ohere.